अझै गुमिसकेको छैन सरकारले काम गर्ने अवसर – Waikhari
गृहपृष्ठ बिचार अझै गुमिसकेको छैन सरकारले काम गर्ने अवसर
ठूलाबडाहरु भने युवाहरुको कुराकामा ध्यान दिँदैनथे। तर युवाहरु आफ्ना कुरा सुनाउननिकै लालायित हुन्थे। त्यसैले उनीहरु आफूलाई परिपक्व देखाउन आफ्ना बाका हजुरबाका जस्तै कपडा लगाउँथे। बा–हजुरबाहरुकै नक्कल गरेर पसलमा गई चिया खाने, चुरोट खाने गर्दथे।
एक दिन एक युवाले हजुरबाको कपडा लगाएर पसल नजिकै गएर रवाफिलो पारामा स्टाइलका साथ रु. २० को नोट दिँदै चुरोट माग्यो। तर पसलकी युवतीले यस युवालाई वास्तै गरिनन्। यसबीचमा पसलकी साहुनीले २–३ जना ग्राहकलाई सामान बेचिसकेकी थिइन्। आफूलाई बेवास्ता गरेको देखेर युवक रिसले भुतुक्कै हुन्छ र रिसाउँदै चश्मा खोलेर हेर्न थाल्यो।
यति बेला नेपाल सरकारका सबै मन्त्री र उनीहरुका आसेपासेहरुले देशभरि तीब्र विकास भएको, सुशासन कायम भएको, कानूनी राज्यको स्थापना भएको र विगतका कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेका पानीजहाज, रेल, टे«ड एण्ड ट्रान्जिट सन्धि लगायतका विकासै–विकासका कार्यहरु भएको देखेका छन्। तर जब चश्मा खोलेर वास्तविकताको धरातलबाट हेर्नेछन् तब महशुस गर्नेछन् कि, कसरी समय र श्रोतको बर्बादी गरिएको रहेछ।
विहानै घरवाट निस्केको मानिस विहानको खाना खान नआएपनि दिउसो खाजाखान आयो भने अलमलिएको मात्रै भनिन्छ, हराएको वा भागेको भनिदैन। त्यसकारण विगतका ७ महिनामा सरकार निकै अलमलिएको छ। खान नपाउने, भोका–नाङ्गा र सामाजिक रुपमा सदियौँदेखि विभेदको अपमानवाट प्रताडित जनताहरुले नयाँ भविष्य र भाग्यको आशा–भरोसासहित बनाएको सरकारले त्यस वर्गका जनताहरुका दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका अवस्थाहरुप्रतिको बेवास्ताले सरकारलाई जनताबाट अलग्याइदिएको छ।
‘सर, तपाईं सकारात्मक सोचले सकारात्मक रुपान्तरण हुन्छ त भन्नु हुन्छ, तर हामी जनताले प्रयोग गर्ने वीरगञ्ज अस्पताल अस्पताल जस्तो छैन। हामीले पढ्ने विद्यालय अस्तब्यस्त छ। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई सबैले छिःछिः र दुरदुर गर्दछन्। सरकारी कार्यालयमा जाँदा अपमान, ढिलासुस्ती बेहोर्नुपर्छ, हामीले हिँड्ने बाटो धुलाम्मे र हिलाम्मे छ। हाम्रालागि सरकार कहाँ छ? हाम्रो गाउँमा अझैपनि आमा–हजुरआमाहरुलाई बोक्सी भनिन्छ। हाम्रो जातका मान्छेले बाटो काटेमा साइत बिग्रन्छ भनिन्छ। १२ वर्ष पुग्ने बित्तिकै हामीलाई विवाह गर्न दबाब दिइन्छ, बा–आमाले दाइजो दिन नसकेका कारण दिदीहरुलाई दिउसै डढाइन्छ। तर न्याय पाइँदैन। वार्डदेखि संघीय सरकारहरुलाई हाम्रा यी यावत समस्याहरुप्रति चासो छैन। हामीलाई यति विघ्न किन बेवास्ता गरिन्छ? हाम्रा हजुरबाका पालादेखिका हाम्रा समस्या ज्यूकात्यूँ छन्। यो सरकारले पनि हाम्रा समस्यालाई केही वास्ता गर्दैन भने आखिर हाम्रो देशको सरकार कसको लागि हो? किन यति ठूलो सञ्जाल भएको कम्युनिष्ट पार्टी केही बोल्दैन? कुरीति, विभेद, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचारविरुद्ध सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै । यदि सधैँ यस्तै भइरहने हो भने कतिवर्षमा यो देश परिवर्तन हुन्छ?’
उनीहरुले विकास रणनीतिको पहिलो प्राथामीकतामा जनशक्तिको सिर्जना, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासलाई निर्धारण गरे भने दोश्रोमा प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको व्यवस्थापन भएको ठहर गरे। तेश्रोमा पूँजीको बद्धि तथा प्रविधि विकास र चौँथोमा वातावरण मैत्री एवं समावेशी–भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनालाई ठहर्‍याए।
मेयर श्रेष्ठको यो भनाइले यस देश–विकासका प्राथामिकता के हुनु पर्दछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। यदि संघीय सरकारले पनि ठाकुर बाबा नगरपालिकाबाट समयमै सिक्यो भने गुम्दै गरेको साख जोगाउन सक्दछ। सदियौँ देखि हेपिएका र पिल्सिएका जनताहरुलाई परिवर्तनको आभाष दिलाएर दैनिक जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि सामाजिक विकास, शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चितता, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, कृषि प्रविधि एवम् सिपको विकास, वन व्यवस्थापन जस्ता कुरा निकै महत्वपूर्ण छन्।
– डा. रामचन्द्र लामिछाने इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजेटिभ साइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्